Massa Lubrense — cimilada bisha, heer-kulka biyaha
World jiga Wadamada Italy Massa Lubrense
Celceliska heerkulka maalin kasta ugu badnaan — 30.2°C August. Celceliska heerkulka habeenkii ugu badnaan — 27°C August. Celceliska heerkulka maalin kasta ugu yaraan — 12.6°C in January. Celceliska heerkulka habeen ugu yaraan — 10.7°C in January.
Celceliska heerkulka ugu badan ee biyaha — 26.6°C go'an August. The heerkulka ugu hooseeya celcelis ahaan biyaha — 14.3°C go'an February.
Roobab ugu badan — 128.7 mm Waxaa lagu duubay November. Roobab Ugu Yar — 19 mm Waxaa lagu duubay August.